မန်းသားလေး| November 30, 2012 | Hits:1
| | မုံရွာ ဟောပြောပွဲအပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာလာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
Ko Thet November 30, 2012 - 7:57 pm We should truly suport her. She is the only one who can bring peace and win-win situation among local public, companies involved and the government. To me, it is almost impossible to make the ongoing project to stop completely as this was the consequences of the foolishness the previous millitary overnment. But the negotiation can bring justic to local public who were suffering from land loss, environmental destructions and poor health issues due to the side effects of the project. I do believe that A May Su can negotiate with government to put the pressure on Wanbao & Millitary back company not only to compensate local public for their sufferings, but also to take care of byproducts (waste) not to occur further environmental destructions. Cheers!
Reply Ngal Hriang December 1, 2012 - 12:55 am Minister of Internal Affairs and all officers who were involved in attacking peaceful protesters needs to be prosecuted. Using force to peaceful protesters is unacceptable.
Reply amt December 1, 2012 - 10:09 pm That’s right.
Reply swe htwe December 3, 2012 - 3:22 pm That’s right.
Reply ဘုန်းဘုန်း December 1, 2012 - 3:18 am ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ဖြင့် နာကျင်စေအောင် နှိမ်နှင်း နှိပ်ကွတ်ခြင်း
Reply ကျော်ကျော် December 3, 2012 - 10:02 am စဉ်းစားစရာရှိတာက တခြားမဟုတ်ပါ။ မုံရွာမှာဉီးပိုင်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့အက်ဆစ်စက်ရုံရှိတယ်။
Reply MM December 1, 2012 - 3:22 am စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့ ဇောတိကရွာမ ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေသော သံဃာ အပါး ၁၂၀၀ ကို ၀န်ကြီးချုပ်က ဆွမ်းလောင်းလှူဖို့ လျှောက်ထားသည့်အခါ သံဃာတော်များက ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့များကို လက်မခံခဲ့ပေ။ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ သံဃာတော်များကို အကြမ်းဖက်သည့်လုပ်ရပ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး၏ လက်ချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ၄င်းတွင် တာဝန်အများဆုံး ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်းဆက်ကပ်သော ဆွမ်းကို လက်မခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းကျောင်းရှိ သံဃာတပါးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
Reply ကိုရဲ December 1, 2012 - 9:14 am သူများနိုင်ငံတွေမှာလို တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီလောက် အထိဖြစ်ပျက်နေတာ အကျည်းတန်လွန်းပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနဲ့ စိတ်မကောင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ တုန်လှုပ်မိပါတယ်။
Reply ဖိုးလုံး December 1, 2012 - 10:40 am “နောက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံဆိုတာ ကျမတို့ ကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့ ရပ်တည်တာမျိုးတွေ ကျမလက်မခံပါဘူး။ သူဟာ ကျမတို့ ကျေးဇူးရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်နီးချင်းပါ။ အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသဖို့ပဲ လိုပါတယ်” ဟု ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့သေးသည်။”
Reply marlar December 1, 2012 - 12:27 pm သာအေးရဲ့ဖော်လန်ဖားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပါ၊
Reply Ngal Hriang December 1, 2012 - 2:25 pm Thar Aye is rejected by Monks. He must be rejected by all other monks in Burma and all the believers too. Then impeach him for good.
Reply mr TM December 1, 2012 - 6:35 pm ယခုလောလောဆယ်အရေးကြီးဆုံးကဒါဏ်ရာရရှိထားသူတွေကိုနိုင်ငံခြားဆေးပညာရှင်တွေနဲ့ပြ သခြင်းအားဖြင့် Chamical သုံးမသုံးသိနိုင်ပြီးဒါဏ်ရာကိုလဲလွယ်ကုူစွာကုသနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် Chamical နှင့်ရရှိသောဒါဏ်ရာသည်လွယ်ကူစွာမကုသနိုင်ရုံတင်မဟုပ်အသားအတွင်းတွင်တဖြေးဖြေး လောင်ကြွမ်းနေတတ်ပါသည်၊ထို့ကြောင့်နိုင်ငံခြားသံမှူးများမှတဆင့်အကူအညီယူသင့်ပါသည်။
Reply mr TM December 1, 2012 - 6:56 pm အလွန်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာဒါဏ်ရာရရှိထားသူများကိုနိုင်ငံခြားဆေးပညာရှင်များနှင့်ပြသ သင့်ပါသည်၊ Chamical သုံးမသုံးသိရန်နှင့်သုံးထားပါကကုသရန်ဆေးဝါးမြန်မာပြည်တွင်မရှိ ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားသံမှူးများမှတဆင့်အကူအညီယူ၍ကုသရန်လိုအပ်ပါသည်၊ဒီအမှုကိုလဲကု လသမဂ္ဂသို့တင်ပြသင့်ပါသည်။အမိန့်ပေးသူအစိုးရအပိုင်းကဖြစ်လျှင်လိုအပ်သလိုအပြစ်ဒါဏ် ချမှတ်ပြီးတရုပ်ကုမွဏီကအမိန့်ပေးသူဖြစ်လျှင်တရုပ်ကုမွဏီကိုပိတ်ပြစ်ပေးရပါလိမ့်မည်။
Reply thihamin December 1, 2012 - 8:44 pm သူတို့တတွေကိုယ်စား အထူးရင်လေးမိပါတယ်။ သံသရာအဆက်ဆက် မတွေးဝံ့စရာပါဘဲ။
Reply james December 1, 2012 - 9:30 pm ၀န်ကြီးချုပ်သာအေး…ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ဝန်ခံမယ်မထင်ဘူး…တယောက်ကိုလွှဲချလိမ့်မယ်…
Reply U Win Maung December 2, 2012 - 6:52 pm As determination in the beginning, oversea experts should also be participated in committee.
Reply မင်းမျိုးနိုင် December 3, 2012 - 9:07 am အိမ်နီးချင်းကောင်းမပီသတဲ့အထောက်အထားတွေခိုင်လုံတယ်ဆိုရင်သံတမာန်အဆက်အ